Yiba Ithimba lethu - Chengdu Baishixing Science And Technology Industry Co., Ltd.
Ngonyaka ka-2015, uDkt. Shi Changqing wajoyina inkampani, wasungula isitudiyo sokuqamba izinto ezintsha, wahola ithimba le-R & D lenkampani, wasungula amaphrojekthi amaningi abalulekile futhi wafaka izicelo zamalungelo obunikazi amaningi, okwaletha amathuba amasha okuthuthukiswa kwenkampani.
Uhlanganyele ku-R & D yomkhakha wamakhemikhali iminyaka engu-13, omuhle ekuthuthukisweni kobuchwepheshe be-API intermediates kanye nemikhiqizo ye-heterocyclic.t.
Ngemva kokuphothula eNyuvesi, ubelokhu enza ucwaningo nokuthuthukiswa kwemikhiqizo ye-amino acid enkampanini yethu, enemikhiqizo emisha engaphezu kwe-10 eyenziwa minyaka yonke.
Ubambe iqhaza ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo yochungechunge lwe-amino acid iminyaka engaphezu kwengama-20, ejwayelene nezakhiwo, izici nentengo yemakethe yayo yonke imikhiqizo ye-amino acid, kanye nenani lamaphrojekthi amasha agciniwe afinyelele inqwaba.
Uzibandakanye emsebenzini wokuhlola iminyaka engaphezu kwengu-35, uqongelele ulwazi olucebile lokuhlola.Futhi inamandla okuthuthukisa nokuqinisekisa izindlela zokutholwa kwe-amino acid, enesibopho sokuphatha ikhwalithi yenkampani.
Iphini lomphathi womnyango wokuhlola ikhwalithi, iminyaka engaphezu kwengu-5 yomsebenzi wokuhlola enkampanini.
Ababuyekezi bayo yonke imibiko emnyangweni wokuhlola ikhwalithi banomoya wokusebenza ngokucophelela nokucwaninga okukhethekile.
Yiba nesibopho sokugcwalisa nokuhlunga wonke amadokhumenti omnyango wokuhlola izinga.
Uyinto ebalulekile yokuqeqeshwa kwesizukulwane esisha sabasebenzi abahlolayo.
I-Acetyl-L-Leucine, 537-55-3, I-Pharmaceutical Chemical, I-L-Glutamine Powder, I-L-Leucine, I-Dl-Pyroglutamic Acid,